न्युजिल्यान्डमा युवा आत्महत्या किन बढी छ ? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
युनिसेफको रिपोर्टअनुसार विकसित देशहरूमध्ये न्युजिल्यान्डमा संसारमै सबैभन्दा बढी युवाले आत्महत्या गरिरहेका छन् । जब कि बाँकी संसारका लागि भने यो रिपोर्ट अचम्मलाग्दो छैन । यसरी युवा आत्महत्यामा न्युजिल्यान्ड अगाडि भएको रिपोर्ट पहिलोपटक सार्वजनिक भएको होइन । युनिसेफको रिपोर्टअनुसार ४१ युरोपेली देशमध्ये सबैभन्दा बढी न्युजिल्यान्डमा १५ देखि १९ वर्ष उमेरका युवाले आत्महत्या गरिरहेका छन् । प्रति एक लाखमा १५.६ आत्महत्याको दर अमेरिकाभन्दा दोब्बर हो भने बेलायतको भन्दा झन्डै पाँच गुना बढी हो ।
आखिर न्युजिल्यान्डमा यस्तो किन भइरहेको छ ?
न्युजिल्यान्डमा यसरी युवाको आत्महत्या बढी हुनुका पछाडि कैयौँ कारण छन् । युनिसेफ, न्युजिल्यान्डका डा. पु्रडेन्स स्टोनका अनुसार यो घटना केवल तत्यांकसँग सम्बन्धित छैन । युवा आत्महत्याको यो डरलाग्दो तथ्यांकको सम्बन्ध अन्य कैयौँ घटनासित जोडिएको छ । स्टोनका अनुसार यहाँका बालबालिकामा गरिबीको उच्च दर, किशोरीहरूको गर्भधारण र बाबुआमाले काम नगर्ने परिवारका कारण यहाँ यसरी युवा आत्महत्या बढी हुने गरेको छ । न्युजिल्यान्ड मेन्टल हेल्थ फाउन्डेसनका सन रबिन्सनका अनुसार स्कुलहरूमा डर देखाउने तथा धम्काउने मामिलामा न्युजिल्यान्डको अवस्था अत्यन्त खराब छ । परिवाहरूबीचको हिंसा पनि निकै बढी छ । यहाँका बालबालिकाले निकै प्रताडना झेल्नुपर्छ । यसका साथै बालबालिकामा गरिबीको दर पनि निकै उच्च छ । यसलाई तत्काल सुल्झाउनु वा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
अन्य पश्चिमी देशको तुलनामा न्युजिल्यान्डको स्वास्थ्य सेवा पनि खराब छ । स्टोनका अनुसार यहाँका पुरुषमा कठोर छविको संस्कृति छ । यस कारण कैयौँ अवस्थामा उनीहरू एक किसिमको दबाबमा रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा पुरुषहरू निकै जमेर बियर पिउने गर्छन् । डाक्टरहरूको भनाइअनुसार पछिल्लो समयमा केही सुधार आएको छ । यहाँका केही संगीतकार र फिल्म निर्माताहरू पुरुषको यस्तो छवि बदल्ने कोसिस गरिरहेका छन् । रबिन्सनको भनाइअनुसार न्युजिल्यान्डले आफ्नो देशका किशोरहरूलाई दबाबसित जुध्न कुनै पनि मद्दत गरिरहेको छैन । यहाँका युवा जेजस्ता दबाब र मानसिक चुनौतीसित जुधिरहेका छन्, त्यसमा सुधार ल्याउन तथा युवाहरूलाई मद्दत गर्न न्युजिल्यान्डले कुनै कदम चालेको छैन । परिणामतः युवा आत्महत्याको दर उच्च हुँदै गएको छ । – नयाँ पत्रिका